Basola uthishanhloko ngokuqasha obhululu eNtokozweni | News24
Basola uthishanhloko ngokuqasha obhululu eNtokozweni
ISITHOMBE:SITHUNYELWE INtokozweni Special School iqhubekile nohlelo lwenhlolokhono yize kube nezihibe umphakathi uveza ukungenami mayelana nendlela uthishanhloko abathi uqasha ngayo.
LUQHUBEKILE yize kube nezihibe uhlelo lwenhlolokhono yokuqashwa kwalowo ozosiza (general assistant) esikoleni eNtokozweni Special school eVulindlela. Iqulu lamalungu omphakathi aqhinqe ngaphandle kwalesi sikole abethi afuna lumiswe ngoMsombuluko.
Lama lungu omphakathi asola uthishanhloko uNkk Sthembile Zungu ngokuqasha izihlobo zakhe, nezihlobo zabangani nobhululu bakhe. Lezi zinsolo zivezwe amanye amalungu omphakathi abengaphandle kwesango lalesi sikole ngenkathi kuqhubeka le nhlolo khono.
Okunye okuvezwe amalungu omphakathi angathandanga kudalulwe amagama awo wukuthi ngaphakathi esikoleni kugcwele izihlobo zikathishanhloko okungabantu abangebona abaseVulindlela.
Lo mphakathi uthi usukhathele ukubona abantu okungebona abasendaweni yaseVulindlela bezicanasela kulesi sikole. Bakhala ngokuthi bona abaqashwa yize nabo bengakwazi ukusebenza.
Elinye ilungu lomphakathi liveze ukuthi lo mkhuba uZungu wawuqala eseyisekela likathishanhloko.
Leli lungu liqhube lathi ngokwazi kwalo ezinye izikhangiso zemisebenzi ezisuke ziphumile kusuke kudingekaabantu abasuke kungabantu basendaweni.
“Yingakho-ke nje kuye kufike umuntu ezosebenza, afike aqambe amanga athi ungowaseVulindlela. Lokhu-ke kusuke kungelona iqiniso ngoba siye sibone uma umuntu esehamba egibela itekisi eliya edolobheni.
“Sigcina futhi sazi ukuthi loyo muntu uyisihlobo sakhe uthishanhloko. Kuyimanje nje kunomuntu wasendaweni yaseMsinga osebenza kulesi sikole. Omunye okhona uhlala eNaperville naye usebenza lana futhi uyisihlobo sikathishanhloko.
“Sikhona siwumphakathi wakule ndawo singakwazi ukuthi nathi sisebenze senze lowo msebenzi osuke ukhangisiwe . Zikhona izakhamuzi ezingakwazi ukusiza ngokuhlanza noma ziphekele isikole.
“Kungani kuze kuthathwa abantu bangaphandle futhi abayizihlobo,” kuzikhalela lesi sakhamuzi.
Lo mphakathi obucula ngaphandle kwamasango alesi sikole uphinde wabonana nomhloli wesekethe i-Edendale uMnu Sandile Zondi.
Ekhuluma nawo lama lungu uZondi uthe umnyango ngeke uze wayeka ukuqhubeka nohlelo lokuqasha ngenxa yezinsolo ezingenabufakazi. Ube esetshela lo mphakathi ukuthi ziyezwakala izikhalo zawo wabe futhi esewucacisela ukuthi uhlelo lokuqasha ludlula ezigabeni eziningi zoMnyango wezeMfundo ngaphambi kokuba kuqashwe.
Uthe: “Kumele kube nento eyisiqiniseko newubufakazi ezoveza ukuthi izinsolo enizishoyo ziyiqiniso. UMnyango awukwazi ukuvele umise ukuqhutshwa komsebenzi ngenxa yezinsolo,” esho uZondi.
Ethintwa ngalolu daba uZungu uthe luqhubekile uhlelo ngoMsombuluko lwenhlolokhono. Walile ukuphawula mayelana nezinsolo zokuqasha izihlobo nobhululu bakhe.
“Uhlelo lokuqasha luhambe kahle kakhulu kodwa ngeke ngize ngikwazi ukuphawula mayelana nokunye,”